Ezekieri 41 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
41 Zvino akandipinza mutemberi, akayera mbiru dzomumativi, kufara kwadzo kurutivi rwuno kukasvika makubhiti matanhatu uye kufara kwadzo kurutivi rwouko kukasvika makubhiti matanhatu, iko kufara kwembiru yeparutivi. 2 Suo racho rakanga rakafara makubhiti gumi, uye mativi esuo aiva makubhiti mashanu nechokuno uye makubhiti mashanu nechouko. Akayera kureba kwaro, kukasvika makubhiti makumi mana; uye kufara kwacho kukasvika makubhiti makumi maviri. 3 Zvino akapinda mukati, akayera mbiru yeparutivi rwesuo, ikaita makubhiti maviri; suo rikaita makubhiti matanhatu; uye kufara kwesuo racho kukaita makubhiti manomwe. 4 Akayera kureba kwayo, kukaita makubhiti makumi maviri; uye kufara kwayo kwakaita makubhiti makumi maviri,+ pamberi petemberi. Akabva ati kwandiri: “Iyi ndiyo Nzvimbo Tsvenetsvene.”+ 5 Akayera madziro eimba yacho, akaita makubhiti matanhatu. Imba yeparutivi imwe neimwe yakanga yakafara makubhiti mana, dzakapoterera imba yacho; ndizvo zvazvakanga zvakaita kumativi eimba yacho yose, kuipoterera.+ 6 Dzimba dzomumativi dzaiva, imba yeparutivi yakaturikidzana neimwe imba yeparutivi, dziri nhurikidzwa nhatu, uye zvikamu zvakadai zvaiva makumi matatu; uye dzaipinda pamadziro eimba yacho, kureva dzimba dzeparutivi dzaiva kumativi ose, kuti dzitsigirwe, asi dzakanga dzisingatsigirwi nemadziro eimba yacho.+ 7 Paiva nomukoto waiwedzera kufara uye uchipoterera, uchingokwira kudzimba dzeparutivi, nokuti mukoto waipoterera weimba yacho wairamba uchingokwira uchipoterera imba yacho.+ Naizvozvo imba yacho yakanga yakafara kumusoro, uye munhu aikwanisa kukwira kuuriri hwokumusorosoro achibva pauriri hwepasi,+ achishandisa nhurikidzwa yepakati. 8 Zvino ndakaona kuti paiva nechikuva chakakwirira cheimba yacho kumativi ose. Kubvira panheyo dzedzimba dzomumativi kusvikira pazvaibatana paikwana tsanga yakazara yemakubhiti matanhatu.+ 9 Madziro eimba yeparutivi, okunze, akanga akafara makubhiti mashanu. Paiva nenzvimbo yakasiyiwa isina chinhu nokuvakwa kwakaitwa dzimba dzomumativi dzeimba yacho. 10 Pakati pedzimba dzokudyira+ paiva nenzvimbo yakafara makubhiti makumi maviri kupoterera imba yacho yose, kumativi ose. 11 Suo reimba yeparutivi raiva kunzvimbo yakasiyiwa isina chinhu, rimwe suo raiva nechokuchamhembe uye rimwe nechokumaodzanyemba; uye nzvimbo yakasiyiwa isina chinhu yakanga yakafara makubhiti mashanu, kumativi ose. 12 Chivako chaiva pamberi penzvimbo yakatsaurwa, chine rutivi rwaiva nechokumavirira, chakanga chakafara makubhiti makumi manomwe. Madziro echivako chacho akanga akafara makubhiti mashanu, kumativi ose; uye akanga akareba makubhiti makumi mapfumbamwe. 13 Zvino akayera imba yacho, uye yakanga yakareba makubhiti zana; nzvimbo yakatsaurwa uye chivako nemadziro acho, zvakanga zvakareba makubhiti zana. 14 Kufara kweimba yacho nechemberi kwayo pamwe chete nenzvimbo yakatsaurwa yaiva kumabvazuva zvaiva makubhiti zana. 15 Zvino akayera kureba kwechivako chaiva pamberi penzvimbo yakatsaurwa yaiva shure kwacho nemavharanda acho aiva kurutivi rwuno nokurutivi urwo, zvikaita makubhiti zana. Akayerawo temberi nenzvimbo yacho yomukati+ nemavharanda echivanze; 16 zvikumbaridzo, nemahwindo aiva nemafuremu aienda achiita maduku,+ nemavharanda zvakanga zvakapoteredza zvitatu zvazvo. Pakatarisana nechikumbaridzo pakanga pakaroverwa mapuranga kumativi ose,+ uyewo kubvira pauriri kusvikira pamahwindo; uye mahwindo acho akanga akafukidzwa. 17 Kusvika pamusoro pesuo uye kusvika muimba yomukati uye nechokunze uye pamusoro pemadziro ose aiva kumativi ose, muimba yomukati uye kunze, paiva nezviyero, 18 kunyange mifananidzo yemakerubhi yakaita zvokutemerwa+ uye mifananidzo yemichindwe,+ nomufananidzo womuchindwe waiva pakati pekerubhi nerimwe kerubhi, uye kerubhi racho rakanga riine zviso zviviri.+ 19 Chiso chomunhu chakanga chiri nechokumufananidzo womuchindwe kurutivi rwuno, uye chiso chomwana weshumba ava nezenze chaiva nechokumufananidzo womuchindwe waiva kurutivi urwo,+ izvo zvakanga zvakaita zvokutemerwa muimba yose kumativi ose. 20 Kubvira pauriri kusvikira kumusoro kwesuo kwaiva nemakerubhi nemifananidzo yemichindwe, zvakanga zvakaita zvokutemerwa pamadziro etemberi yacho. 21 Kana iri temberi, gwatidziro racho rakanga riine mativi mana akaenzana;+ uye pamberi penzvimbo tsvene paiva nechitarisiko chakafanana nechitarisiko chinotevera: 22 atari yematanda yaiva yakakwirira makubhiti matatu, yakareba makubhiti maviri, uye yaiva nematanda ayo omumakona.+ Kureba kwayo nemadziro ayo zvaiva zvematanda. Zvino iye akati kwandiri: “Iyi ndiyo tafura iri pamberi paJehovha.”+ 23 Temberi nenzvimbo tsvene zvaiva nemasuo maviri.+ 24 Madhoo acho aiva nezvipenga zviviri zviviri, zvipenga zvacho zviviri zvaigona kupeteka. Dhoo rimwe chete raiva nezvipenga zviviri, uye rimwe dhoo racho raiva nezvipenga zviviri. 25 Paari, ipo pamadhoo etemberi, pakanga pakagadzirwa mifananidzo yemakerubhi neyemichindwe,+ yakaita seiya yakagadzirirwa madziro, uye pamberi pevharanda raiva kunze paiva nedenga rematanda. 26 Paiva nemahwindo aienda achiita maduku+ nemifananidzo yemichindwe nechokuno uye nechouko kumativi evharanda racho nedzimba dzomumativi eimba yacho nematenga acho.